छाउगोठ भत्काउँदैमा छाउप्रथाको अन्त्य हुन्छ ? – WASHKhabar
छाउगोठ भत्काउँदैमा छाउप्रथाको अन्त्य हुन्छ ?
२६ पुष २०७६, शनिबार ११:०२ 417 पटक हेरिएको
काठमाडौं : सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा धमाधम छाउगोठ भत्काउने काम भइरहेको छ । राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि छाउगोठ भत्काउनमा व्यस्त छन् ।
गएको मङ्सिरमा अछामकी पवित्रा रावतको छाउगोठमा ज्यान गएपछि गृह मन्त्रालयले गएको पुस ९ गते निर्णय गर्‍यो, अब छाउगोठ भत्काउनु पर्छ । छाउपडी मान्ने र छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्नेलाई वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहुलियत कर्जालगायतका सुविधा नदिने निर्णयसँगै छाउगोठ भत्काउने काम पनि सुरु भयोे ।
के छाउगोठ भत्काउँदैमा छाउपडी कुप्रथाको अन्त्य हुन्छ त रु भन्ने प्रश्न उठेको छ । प्रश्न स्वभाविक छ, किनभने यसअघि पनि छाउगोठ पटक पटक भत्काइएकै थिए । खै त छाउपडी प्रथा हटेको ?
मुगुका सांसद गोपाल बम छाउपडी गोठमा बस्नु कतिपयको बाध्यता भएको भन्दै गोठ भत्काउनु पहिले बस्ने ठाउँको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताउनु हुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘गरिबीको कारण पनि धेरैजसो दिदीबहिनी घरमा बस्न सकेका छैनन् । सानो घरमा सबै परिवार अटाउनु पर्छ । यस्तो बेलामा कसरी अर्को कोठा खोज्ने रु’
अहिले गृह मन्त्रालयको निर्देशनमा छाउगोठ भत्काउने अभियान सुरु भएको हो । तर छाउगोठ भत्काउन निर्देशन दिने गृह मन्त्रालयले जनचेतनाको लागि के गर्‍यो त रु मन्त्रालयका सूचना अधिकारी उमाकान्त अधिकारी भन्नुहुन्छ, ‘हाम्रो काम बजेट लिएर गाउँमा गएर सचेतना दिने हैन । त्यस्तो गर्न हामीसँग बजेट पनि छैन । हामीले गर्ने भनेको प्रहरी, स्थानीय र यो क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घसंस्थासँग समन्वय गर्ने र यसो गरौं भनेर सम्झाउने हो ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने नौ वटै जिल्लामा महिला सशक्तिकरणका लागि एक करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जनाएको छ । यसबाट पालिकाहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काका अनुसार सबैभन्दा बढी यो प्रथा रहेको अछाम, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलास् चार जिल्लालाई छनोट गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सुरु गरिएको छ ।
तर ती सङ्घसंस्थाले कति समय काम गर्छन् भन्ने मुख्य कुरा हो । गाउँमा एउटा संस्थाले काम गर्छ, बढीमा एकरडेढ वर्ष । त्यो पनि सबै गाउँमा हैन । अनि बाँकी ठाउँमा गएर कसले सचेतना दिने ?
अर्को कुरा सुदूरपश्चिम र कर्णालीको छाउपडीको नाममा काठमाण्डौमा गोष्ठी, सभा र कार्यक्रम हुन्छन् । काठमाण्डौका चारतारे होटेलमा अछाम, बाजुराका दुईरचार जना किशोरीलाई बोलाएर अङ्ग्रेजीमा भाषण सुनाउँदैमा यो प्रभावकारी हुन्छ त ?
अछाममा काम गर्ने सङ्घसंस्थाले महिनावारी भएको बेला खाना पकाउनु पर्छ, सबैलाई छुँदै हिँड्नु पर्छ, मन्दिरमा जानु पर्छ, पूजाआजा गर्नु पर्छ भनेर सिकाउँछन् । सुरुमै यस्तो सिकाउनु कत्तिको जायज हो भन्ने अर्को प्रश्न छ ।
अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख अम्बिका चलाउने भन्नुहुन्छ, ‘यो प्रथा अन्त्यका लागि छाउगोठ भत्काउनै पर्छ । तर अछामको हकमा संरचना भत्काएर मात्रै हुँदैन । पहिले नागरिकलाई चेतना जगाएर सोचाइमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ । पहिले हामीले गोठ भत्कायौँ, हामी घरभित्र बस्यौँ तर धेरैजसो दिदीबहिनीहरु पाल टाँगेर चिसोमा दिन बिताउन थाले । अहिले पनि यही अवस्था नदोहोरिएला भन्न सक्दैनौँ ।’
पत्रकार इन्द्रसराले लेख्नुभएको यो लेखलाई उज्यालो अनलाइन डट कमबाट साभार गरिएको हो ।